Ndwendwela kwaye ujonge umgangatho wemicroscope ngaphambi kokuthunyelwa komyalelo wabathengi baseDenmark ngo-2019.
U-Opto-Edu unomthengi wakudala osuka eDenmark ngaphezulu kweminyaka eyi-15, e-odola ngaphezulu kweemodeli ze-microscope ze-30 ixesha elide, umthamo wentengiso ngaphezulu kwe-1000 ukuya kwi-1500 ii-pcs ngonyaka ngamnye. Nokuba iodolo nganye ayinkulu kangako, kodwa njengoko ibandakanya iimodeli ezininzi, umthengi uneemfuno ezininzi zeenkcukacha ezivela kwilogo yoshicilelo, umbala wepeyinti, ukupakisha ...
Siphumelela ithenda kurhulumente waseBolivia ngee-1980 ii-microscope ezingama-1980
Kwi-2019-02, umthengi we-Opto-Edu ovela eBolivia wasazisa nge-imeyile ukuba, ifayile yethu yethenda yeemodeli zemicroscope ezi-3 iyonke ngo-1980 ii-pcs iphumelele i-oda zikarhulumente zethenda! Kufuneka siqinisekise kabini zonke iinkcukacha, ixabiso, iindleko zokuhambisa kunye nexesha lokuhambisa kwezi modeli kwangoko, kunye nazo zonke ...
Kwi-2018, umthengi wethu wase-Bangladesh usixelele ukuba bazokuzimasa ithenda kaRhulumente, ngaphezulu kwe-30000 + microscopes, enamaxwebhu asemthethweni ethenda. Ithenda ijolise ekuboneleleni ngemicroscope yomfundi kwizikolo ezingaphezu kwe-10000 + kwilizwe lase-Bangladesh, yenza ukuba abafundi ...